गाउँपालिकाको अनुदानमा चिटिक्क चित्रे « Janata Samachar
गाउँपालिकाको अनुदानमा चिटिक्क चित्रे
प्रकाशित मिति : 31 July, 2019 10:58 am
स्याङ्जा । शहरको त के कुरा भयो र ? गाउँमा खरले छाएको घर देखिंदैन । माटो र ढुंगाले बनाइएका घर पनि कमै देखिन्छ । २०७२ सालको ‘गोरखा भूकम्प’ ले बाँकी राखेन । भूकम्पपछि घरका संरचना फेरिए । माटो र ढुंगाको सट्टा सिमेन्ट, बालुवा र रड प्रयोग गरेर घर बनाउन थालियो । खर, छ्वालीको ठाउँमा जस्तापाताले घर छाउन थालियो । जस्तापाता पनि रंगिन प्रयोग हुन थाले ।
एउटै रंगको जस्तापाता प्रयोग गरेर घर छाउने अभियान हरिनाश गाउँपालिकाले चलाएको छ । गाउँलाई एउटै रंगले परिचित गराउने अभियानमा लागेका छन् बासिन्दा ।उनीहरूलाई गाउँपालिकाले अनुदान सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाले अभियानई साथ दिएको छ ।
यहाँको विकास निर्माण, सामाजिक एक रूपकता तथा मेलमिलापमा निकै परिवर्तन आएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । एक रूपता ल्याउन सिंगो चित्रे गाउँका घरमा एउटै रंगको छाना छन् । भित्तामा एउटै रङ छन् । १ सय २ घरधुरी छन् । ती घरका छानामा निलो रंगको जस्तापाता छ ।
घरका भित्ताान पनि एकरूपकता छ । कलेजी र हरियो रंगले लगाइएको छ । मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यस गाउँका सबै घरमा गाउँपालिकाको ७० र वासिन्दाको ३० प्रतिशत लगानी छ । गाउँपालिकाभित्र एकरूपता ल्याउन अभियान चलाइएको गाउँपालिका प्रमुख खिमनारायण मानन्धरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हरिनाश समृद्धिको लक्ष्यमा छ । चेतना र एकताको सन्देश फैलाएका छौं ।’
गाउँपालिकाको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न एउटै रंग प्रयोग गरिएको उपाध्यक्ष झममाया पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै स्थानीयले एकको नजरमा अर्कोलाई समान देख्ने वातावरणको विकास नभएसम्म समाजको विकासमा कठिनाइ हुन्छ । एकताको सन्देश दिन अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
काठमाडौं । ‘यौनहिंसा भनेको के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसामा परेका महिलाले कसरी व्यक्त
महिला फुटबलमा नेपाललाई रजत पदक
कास्की । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपालले रजत पदकमै चित्त
विद्यालयद्वारा १ करोड ५० लाख चन्दा संकलन
कौरव खत्री बागलुङको रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले आर्थिक सहयोग संकलनबाटै डेढ करोड भन्दा बढीको आर्थिक संकलन
मन्त्रालयका सचिव आफै लिन्छन्, चालक र निजी सचिवको सुविधा
माधव पनेरु पोखरा । गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवले दोहोरो सुविधा